Lacagta Dalka Abu Dhabi Ayay Kubbada Cagta Ku Burburinayaan-Javier Tebas Oo Cusbo Sii Mariyay Ganaaxa Ay Man City Ka Filayso UEFA. - Gool24.Net
Lacagta Dalka Abu Dhabi Ayay Kubbada Cagta Ku Burburinayaan-Javier Tebas Oo Cusbo Sii Mariyay Ganaaxa Ay Man City Ka Filayso UEFA.
Kooxda Man City ayaa sugaysa waxa uu noqon doono go’aanka ay gacanta ku hayaan golaha garsoorka UEFA kuwaas oo la sugayo in ay ugu danbayn go’aamiyaan natiijada ka soo baxday baadhitaankii City lagu hayay.
Laakiin ka hor inta aan natiijada baadhitaanka iyo xukunka Man City lagu dhawaaqin, waxaa Man City cadho wayn ku sii abuuray madax waynaha horyaalka La Liga ee Javier Tebas .
Javier Tebas ayaa ah ninka inta ugu badan ka soo horjeeda kooxaha Man City iyo PSG oo uu aaminsan yahay in lacagtii wadamada carbeed ay ku maal galinayaan kubbada cagta taas oo aanu sharciga UEFA ogolayn.
Javier Tebas ayaa hore eedayn kulul ugu soo jeediyay kooxda PSG iyada oo colaadoodu ka soo bilaabantay maalintii ay PSG lacagta 222 milyan yorada ahayd kula wareegtay Neymar Jr.
Laakiin hadda Javier Tebas ayaa sheegay in Man City ay lacagtii wadanka Abu Dhabi ay ku burburineen tartamada kubbada cagta isaga oo UEFA ku sii dhiiro galiyay in talaabo laga qaado.
Madax waynaha La Liga ee Javier Tebas ayaa mulkiilaha Man City ee Sheikh Mansour ku eedeeyay in uu kooxdiisa ku maal galiyay 1.3 bilyan gini tan iyo markii uu la wareegay kooxda sanadkii 2008 kii lacagtan oo uu aaminsan yahay in ayna kubbada cagta ka soo bixin.
Javier Tebas oo lacagta Man City ee wadanka carbeed ka imanaysa ayaa yidhi: “Haddii aynu ogolaano in ay lacagtaasi timaado oo aan laga soo saarin kubbada cagta lafteeda oo ah lacag dawlad ka imanaysa, tani ma sii ahaan doonto ciyaar, tani ma sii ahaan doonto kubbada cagta”.
“Waxay in badan la mid noqonaysaa Toy-ga caruurtu ku ciyaarto, wax dawladi ku ciyaarto, marka wax lagu ciyaaro, carruurtu waxay bilawdaa in ay carruurta kale la ciyaarto, waxaad ku dhamaysanaysaa adiga oo hanaankii oo dhan burburiyay”. ayuu Tebas hadalkiisa sii raaciyay.
Javier Tebas oo isku daraya PSG iyo Man City ayaa yidhi: “Kani waa waxa ay PSG, Man City iyo kooxaha lacagta badan lihi ay dul dhigi karaan kubbada cagta taas oo ah halista ay xaqiiqdii tahay in ay UEFA ka shaqayso”.
“Sababtoo ah halka ay gabi ahaanba dhibaatadu ka soo baxday waa saamaynta sixir bararka ay Yurub oo dhan ka sameeyeen Man City iyo PSG waxayna inta kale ee koxaha Yurub doonayaan lacag ay raggaas kula tartamaan” ayuu Tebas hadalkiisa ku sii xoojiyay.
Javier Tebas oo ka hadlaya ganaaxa ay Man City la kulmi karto ayaa yidhi: “Anigu ma ogi waxa uu noqon doono ganaaxa la dul dhigi doono Manchester City, laakiin anigu lama yaabi doono ganaax kasta”.
Javier Tebas ayaa soo jeediyay in Man City iyo PSG ganaaxyo lagu soo rogo waxayna hadda u muuqataa in uu xaalada kiiska Man City iyo UEFA uu sii xoojiyay.